I-25 YEENWELE EZIPHAMBILI ZAMADODA EZIBHOYE (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Iinwele ezingama-25 zamadoda aneendevu
Wonke umntu ufuna iindevu ezipholileyo kunye neenwele kule mihla. Izinwele ezifanelekileyo zamadoda aneendevu zinokubonakala ngathi ziyindoda kwaye zinomtsalane. Nokuba idibanisa iinwele ezimfutshane zamadoda ngokupheleleyo ...
Wonke umntu ufuna iindevu ezipholileyo kunye neenwele kule mihla. Izinwele ezifanelekileyo zamadoda aneendevu zinokubonakala ngathi ziyindoda kwaye zinomtsalane. Kwaye nokuba idibanisa iinwele ezimfutshane zamadoda ezinentshebe epheleleyo okanye iinwele ezinde ezinentshebe ende, ulungelelanisa iinwele zakho zobuso kunye nomdlalo wokucheba yindlela elula yokuba nesitayile ngakumbi kwaye ujonge ushushu kumantombazana. Ngombulelo, zininzi nje iinwele ezoyikekayo zamadoda kunye nezimbo zeendevu onokukhetha kuzo.
Ukuba ungumfana onokukhulisa iindevu kwaye ungakhange ulinge ukunqunyulwa okunesimbo kunye nokudityaniswa kwesitayile, unokulahleka kwindlela yanamhlanje. Apha ngezantsi, uya kufumana isikhokelo sethu kweyona ndlela ilungileyo yokwenza iinwele kumadoda aneendevu.
1Eyona Ndoda yokucheba iinwele ineeendevu
MbiniIinwele ezimfutshane + iindevu ezinde
3Iinwele ezinde + iindevu
4Ukucheba + iindevu
5Ukuphela kweenwele + zeendevu
6Izinwele ezinde ezomileyo + Mfutshane kwiindevu ezipheleleyo
7Iinwele ezimfutshane zeMessy + eziTyebileyo + iindevu
8Amacala amafutshane + uKama omde ngaphezulu + kweendevu ezigcweleyo
9Ukuphela okuphezulu + kweWavy Quiff + Beard
10Indoda yePonytail + yeenwele ezinde + iindevu ezipheleleyo
Shumi elinanyeI-Razor Undercut Fade + Iinwele eziMhluziweyo + Iindevu ezijiyileyo
12Amacandelo amafutshane + aqatywe phezulu phezulu + aneentshebe ezinde ezinde
13I-Knot ephezulu + Amacandelo amafutshane + iindevu
14Iindevu ezinde ezipholileyo + zityibilika emva + kumacala achetyiweyo
Shumi elinantlanuCrew Sika + iindevu
Eyona Ndoda yokucheba iinwele ineeendevu
Kuba ayizizo zonke iindevu kunye neenwele combo ezisebenzayo, kubalulekile ukuba abafana bakhethe iinwele ezifanelekileyo kwisitayile sabo seendevu. Umzekelo, i-undercut ibisisitayile esithandwayo ngokumangalisayo, ke ngekhe umangaliswe kukuva ukuba i-slcut back undercut isebenza kakuhle ngentshebe edibeneyo. Kwaye ngelixa ibhanti yendoda okanye iqhina elingaphezulu linokuphambanisa, abafana abaneenwele ezinde kunye neendevu basefashini.
Ngokuphathelene nezinye iindlela zokukhulisa iindevu ezinenwele ezimfutshane, phantse naziphi na iinwele ezingcono zamadoda zinokubonakala zilungile okoko iinwele zakho zobuso zimile kwaye zilungiswe kakuhle. Ngapha koko, ukuphela kweendevu kunokuba yinto entle ukuzama.
Ukuphefumlelwa ekukhuleni kwindevu ende, epheleleyo kunye nokukhetha i-hairstyle entsha kwisitayile nayo, jonga ingqokelela yethu yemifanekiso!
Iinwele ezimfutshane + iindevu ezinde
Iinwele ezinde + iindevu
Ukucheba + iindevu
Ukuphela kweenwele + zeendevu
Izinwele ezinde ezomileyo + Mfutshane kwiindevu ezipheleleyo
Iinwele ezimfutshane zeMessy + eziTyebileyo + iindevu
Amacala amafutshane + uKama omde ngaphezulu + kweendevu ezigcweleyo
Ukuphela okuphezulu + kweWavy Quiff + Beard
Indoda yePonytail + yeenwele ezinde + iindevu ezipheleleyo
I-Razor Undercut Fade + Iinwele eziMhluziweyo + Iindevu ezijiyileyo
Amacala amafutshane + aqatywe phezulu phezulu + aneentshebe ezinde ezinde
I-Knot ephezulu + Amacandelo amafutshane + iindevu
Iindevu ezinde ezipholileyo + zityibilika emva + kumacala achetyiweyo
Crew Sika + iindevu
ukucheba iinwele zamadoda kubuso obungqukuva
yintoni ukucheba iinwele